Ndụmọdụ Kachasị Mma Maka Usoro Ọdịnaya Millennium Ahịa | Martech Zone
Ọ bụ ụwa nke pusi vidiyo, ire ahịa ahịa, na nnukwu ihe na-esote. Site na nyiwe niile nke ịntanetị iji ruo ndị ahịa nwere ike, nnukwu nsogbu bụ otu esi eme mee ka ngwaahịa gị dị mkpa ma na-achọsi ike n'ahịa ịchọrọ.
Ọ bụrụ na ahịa gị a na-achọkarị bụ puku afọ, ị ga-enwe ọrụ siri ike karị na-egbo mkpa nke ọgbọ na-etinye ọtụtụ awa kwa ụbọchị na mgbasa ozi mmekọrịta yana usoro mgbasa ozi ọdịnala anaghị achọpụta.
Ọgbọ nke maara ihe ha chọrọ ma ghara idozi ihe ọ bụla bụ obere ìgwè siri ike. N'agbanyeghị nke a, ọ gaghị ekwe omume mepụta usoro ahia di ire nke na-eleba anya puku afọ, ọ na-achọ ụzọ ọhụụ iji jikọta ha.
Gịnị Na-adịghị Arụ Ọrụ?
Ọ bụrụ na ị na-anwa iru ọtụtụ puku afọ, enwere ihe ole na ole iji zere ma ọ bụrụ na ịchọrọ inwe mgbasa ozi ahịa na-aga nke ọma:
Oge agwụ ike
Nnukwu ọdịnaya dabere na ederede
Mgbasa ozi na TV na akwụkwọ akụkọ
Ihe ndị a na - ewepụ ọtụtụ puku afọ site na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa. Ha anaghị achọ ka agwa ha ihe ha ga-azụta n'otu ụzọ ahụ dị ka ọgbọ ndị gara aga nke zara nke ọma na ịma mma nke mgbasa ozi etinyebere nke ọma na ọkwa ahịa doro anya.
Gịnị Na-arụ Ọrụ?
Ihe ato di nkpa maka imeputa uzo ahia di ire maka otutu puku afọ. Ị ga-emerịrị ya: Banye, Nabata, ma kuzierenụ.
Social media weebụsaịtị dị ka Instagram, Snapchat, Twitter, na Youtube na-eji The nyiwe zuru okè maka ikenye na-akwalite ọdịnaya na bụ anya pụtara, shareable, na ọtụtụ ihe, relatable.
Na nso nso, Honda mepụtara mgbasa ozi ahịa na-aga nke ọma iji mee ọtụtụ puku afọ site na iji ihe nzacha Instagram na usoro SnapChats nke ekesara dika oku oku. Approachzọ ha si mee ka ha nwee ike ịmepụta ọdịnaya nwere ike ịkọwa ihe na nke a na-eme n'oge a na mmekọrịta ọha na eze na-enweghị ike ịre ere.
Wendy na-ekwusi ike na akaụntụ Twitter nke na-aza ndị ahịa ajụjụ mgbe niile smart, nkọ, na witty ọchị. Typedị "trolling" a bụ isi nkuku nke ọdịbendị narị afọ iri ugbu a ma na-etinye isi ntọala nke narị afọ iri a n'ụzọ dị otu a bụ ụzọ kachasị mma maka ịkụbanye na nke a na-achọsi ike.
Otu n'ime ihe ndị bụ isi na -emepụta ihe usoro ahia di ire ma na-aga n’ihuebumnuche nke puku afọ a bụ site na itinye ha n'ọrụ na ntanetị mgbasa ozi ha hụrụ n'anya. Site n'ime nke a, ị na - ewere usoro mbu iji bulie ndị ahịa gị ma zute ebumnuche arụmọrụ gị yana amụma atụmatụ gị.
Vidio abụrụla ahịa juggernaut na ụlọ ọrụ na-emefu ọtụtụ nde dollar kwa afọ na mgbasa ozi vidiyo na weebụsaịtị na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta. Mana ọkọlọtọ gị a-bụ-ihe-anyị - na - nke a - bụ - ihe - ire ​​- ịre ahịa vidiyo ka agaghị eme ihe ọbụla iji nwee obi ụtọ otu puku afọ ndị ahịa.
Viral vidiyo bụ a nnukwu akụkụ nke ahịa na imepụta vidiyo nke na-esote nnukwu ihe bụ ụzọ kachasị mma iji nwee obi ụtọ ma dọta ndị ahịa puku afọ gị. N'ime ihe karịrị 4 awa ụbọchị na ekwentị ha, ọ dị mma ịsị na puku afọ ga-ahụ ezigbo vidiyo. Nwamba, ida, satires, remixes nke akụkọ akụkọ, agụ egbugbere ọnụ ọjọọ, ị kpọrọ ya ha lere ya anya.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ dịka Old Spice na GoDaddy bụ ndị ama ama maka mgbasa ozi vidiyo kachasị elu nke na-agbasawanye mgbe niile n'ihi ekele ha, mmekọahụ, ịkwa emo, na mgbe ụfọdụ down-right-real-ụwa-adị.
Ma ọ bụghị naanị vidiyo ọzọ!
Ma mgbe obere vidiyo na-akpa ọchị is nnukwu ụzọ iji tinye aka na ndị na-ege gị ntị na narị afọ iri, nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị ya naanị ụzọ. Banye ndị otu puku afọ ị ga - ege ntị nwekwara ike ị nweta site na obere ederede na - adọrọ adọrọ metụtara nkwenkwe ha, nsogbu mmekọrịta ha na akụkọ ụwa. Ọtụtụ mmadụ, gụnyere Millennials ahọrọ akụkọ dị mkpirikpi ma na-adọrọ mmasị nke na-akpali ha ịgụcha ibe ahụ. Y’oburu n’inweghi ike imeputa ihe imeputa ihe ichoro ichoro ichota ma nye gi obi uto ndi n’acho gi, yabụ ị nwere ike tụlee ịchọ ndị edemede na - enweghị akwụkwọ na nyiwe dị ka Upwork ma ọ bụ goro ndị edemede ọrụ dịka Akwụkwọ edemede.
Nzacha, memes. boomerangs, akwụkwọ mmado, clickbait, na egwuregwu mkpanaka abụrụla ụzọ dị mma iji gbado ndị na-ege ntị na-enweghị usoro mgbasa ozi. Formsdị ntụrụndụ ndị a na-eme ka ọtụtụ nde mmadụ nwee mmasị na mbak na-eji aghụghọ akpalite ngwaahịa gị na-enweghị ịmanye ya akpịrị ndị ahịa.
Agbanyeghị ị kpebie ịnabata ndị ahịa puku afọ gị site na usoro azụmaahịa gị, hụ na ịgbaso ntuziaka ndị a dị mfe:
Mee ka ọ dị ka Ọ masịrị!
Mee ka ọ bụrụ Nke ekwesiri!
Mee ya ihe ọchị!
Mee ka ọ dị mkpa!
Mee ya Original!
Mee ka ọ bụrụ Relatable!
Atingkụziri puku afọ na uru nke ngwaahịa bụ akụkụ ikpeazụ iji tụlee mgbe ị na-emepe usoro ịzụ ahịa dị irè maka puku afọ. Ka otu puku afọ ga-amata banyere ụlọ ọrụ gị na ngwaahịa gị - site na otu esi kee ya ruo ebe uru na-aga - ka o yikarịrị ka ha ga-eme mkpebi ịzụta n'aka gị.
Tụlee ịmepụta usoro ịzụ ahịa azụmaahịa nke, na mgbakwunye na ebumnuche gị ndị ọzọ, kuziere gi ihe dika puku afo gara aga banyere uru na nchekwa gburugburu ebe obibi, ikike mmadụ, ma ọ bụ ọrụ ebere nke uru sitere na ngwaahịa na-aga n'ihu iji nyere aka. N'ụzọ nke ahụ, ọtụtụ puku afọ na-eche ike nke ịzụta ha na-enweghị ikpe ọmụma nke oriri ha.
Clothinglọ ọrụ uwe uwe Patagonia nyere n'oge na-adịbeghị anya uru ụbọchị niile nke Black Friday Sale ka ebere. Ahịa ha sitere n'elu ụlọ na usoro ahịa ha dabere na puku afọ ga-ejikọ ihe kpatara ya na isoro ndị enyi na ndị na-eso ụzọ kerịta ozi ahụ.
Ọbụna ALS Ice Bucket Challenge bụ anụ ọhịa ihe ịga nke ọma ahịa mkpọsa na agụmakwụkwọ agwakọtara na onyinye ọrụ ebere na ụzọ ọchị na ụzọ na-atọ ụtọ nke dị mfe ịmepụta ma nye ohere maka ịntanetị ama. N’ikpeazụ, nzukọ ahụ wepụtara ihe karịrị $ 115M na onyinye.
Companieslọ ọrụ ndị ọzọ agbasoro usoro ndị a iji zụọ ahịa ma kpọsaa site na ịme ka ọtụtụ puku afọ mara ọrụ ọrụ ebere ha, na-akwado onwe ha na mgbasa ozi ahịa na-aga n'ihu na nwoke na nwoke na nwanyị na di na nwunye, yana kwalite usoro iwu na omume ha iji mee ka ndị ahịa mara banyere ịsọ mpi na ụgwọ ọrụ na uru a kwụrụ ndị ọrụ ha niile.
Itinye akwụkwọ n'ime usoro azụmaahịa gị bụ dị oké mkpa iji ruo ọtụtụ puku afọ. Ka ị na-enwe ike ijikọ ha na akụkụ dị iche iche nke ngwaahịa ma ọ bụ ụlọ ọrụ, ọ ga-adịrị ya mfe ịmepụta iguzosi ike n'ihe na-adịte aka ma na-aga n'ihu na-ere ngwaahịa maka ha nke ọma.
Otú Can Pụrụ Isi Mee Ka Ọ Na-arụ Ọrụ!
Mgbe ị na-etinye ụzọ nke ọma maka mgbasa ozi ahịa na-aga nke ọma nke na-elekwasị anya na ọtụtụ puku afọ dị mfe, usoro nke ime ya n'ezie ga-achọ ọrụ dị ukwuu dịka ngwaahịa, akara, na ụlọ ọrụ ọ bụla dị iche.
Malite site na nyocha usoro ihe ịga nke ọma (na ọbụlagodi) nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ jirila. Mụta ihe n’otú ha siri mee ya, ngwá ọrụ ndị ha jiri rụọ ọrụ, na otu ha siri rụọ ya tinye aka, nwee obi ụtọ ma kuziere ndị ahịa puku afọ ha.
Ọnọdụ kachasị njọ, were otu puku afọ ma ọ bụ abụọ iji nye gị naanị nghọta ịchọrọ ihe otu n'ime ọnọdụ nchịkwa mmadụ chọrọ nke ukwuu na-achọghị na achọghị.
Tags: nzachamemes. boomerangsNkwenyeakwụkwọ mmado